Semalt: Google Analytics Referrer Spam. Ny fiandohany sy ny tanjony.
Spam ao amin'ny kaonty Google Analytics dia olana mahazatra amin'izao andro izao izay tonga amin'ny endriny roa samy hafa: spam referral bot sy tsipika fanitsiana ghost. Ryan Johnson, Semalt Tomponandraikitra amin'ny Customer Success, dia milaza fa ny spam referral bot dia fanangonana botsika marina izay mitsidika ny tranokalanao na ny bilaogy, ka ny Google Analytics dia manisa ny fampahalalana momba ny referanda. Ny tranonkala fitsangatsanganana matoatoa dia ny andiam-botsaka izay mamakivaky tranonkala iray ary mivantana mivantana amin'ireo mpizara Google Analytics. Tsy mitsidika ny tranokalanao izy ireo, ary mamitaka ny Google Analytics mba hanisa ny fomba fijerin'ny pejy sy ny fivoriana. Noho izany, ireo sokajy roa ireo dia samy hafa, fa izy roa dia afaka manimba ny antontan-kevitra momba ny analytics amin'ny lafiny iray.
Afaka mandrehitra tranokala na bilaogy ve ny spam?
Voalohany indrindra, avelao aho hanazava fa ny spam referral Google Analytics dia miseho rehefa miezaka mandefa ny sandoka amin'ny Google Analytics ireo hackers na spammers. Mampiasa ireo mari-pamantarana famaranana manokana izy ireo hanatanterahana izany ary hanangona ny adiresy IP an'ny olona marobe. Mandika matetika ny pejin-drindrina amin'ny pejy Google Analytics izy ireo miaraka amin'ny fanampian'ny ID-Tracking UA anao, mamela azy ireo amin'ny fampahalalana momba ny fanondroana ireo tranonkala sy bilaogy marefo.
Ny tanjon'ireo spammers sy hackers dia ny hampahatsiahy anao ny rohy avy amin'ny fiarahamonina ary miteraka vola be avy amin'ny dokambarotra ataony..Manolotra sigara izy ireo na manery anao handefa pejy mampiahiahy na mifindrafindra. Ny safidy tsara indrindra dia ny tsy hitsidika tranokalan'ny spammer na bilaogy raha te-hiantoka ny fiarovana anao sy ny fiarovana ianao.
Tsy misy fahasimbana mivantana amin'ny tranokalanao, ankoatra ny habetsaky ny fitsapana azonao isan'andro. Ankoatr'izay, ny botsotra dia manjary ao amin'ny servers, ary ny paikady SEO dia tsy afaka manampy anao hanakana azy ireo tsy tapaka. Ireo mpitsikilo sy mpitsikilo dia tsy maniry afa-tsy ny mametraka ny tranokalany manokana amin'ny valin'ny fikarohana sy manindry ny tranonkalanao ao ambadiky ny fifaninanana. Noho izany, tsy manana na inona na inona mikasika ny tranokalanao izy ireo na raha tsy manapa-kevitra ny hangalatra ny mombamomba anao manokana izy ireo.
Tena fifamoivoizana marina ve izany
Mba hanazava fa tsy ny fizotran'ny fifamoivoizana dia ny spam referrer Google Analytics. Ireo zatovolahy ao ambadik'ity dia tsy nitsidika velively ny tranokalanao fa nandefa fangatahana sandoka amin'ny kaonty Analyten amin'ny alalan'ny botsy sasany. Ho hita ao amin'ny Lisitry ny Referrer Sites izy ireo raha toa ka manara-maso ny fananan-tany> Fahazoan-dalana> Fifamoivoizana> rehetra. Mampitombo ny taham-pidinan'ny tranonkalany izy ireo ary mampihena ny fihenam-bidy. Ny mpilalao sy ny mpitsikilo dia mamoaka ny ID ID UA-XXXXY-Z ary mametraka sintona sandoka na fangatahana hamotehana ny orinasanao amin'ny aterineto.